Markhaatiyada - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Tan iyo markii Ouzhan uu bilaabay ganacsiga adduunka, waxaan ku guuleysanay macaamiisha badan:
Aad ayaan ugu qanacsanahay howsha ouzhan. Adeegga macaamilku waa dhakhso oo Gaby wuxuu shaqooyin aan caadi ahayn ka qabtay qaybahayga. Waxaan runtii rajeynayaa inaan la shaqeeyo Ouzhan markale!
Degdeg deg deg ah iyo badeecad tayo leh oo loo sameeyay sifo. Ma weydiisan karo intaas wixii ka badan.Ouzhan waa lamaane weyn!
Qaybaha waxaa lagu sameeyay iyadoo la isticmaalayo moodooyinka 3D. Intii lagu guda jiray dooda amarka, injineeradu aad ayey ufiirsanayeen waxayna iga caawiyeen inaan helo khaladaadkeyga si aan u saxo. Sameeyay tayo sare leh. Rarka ayaa la dabagalay. Qayb kastaa si dhammaystiran ayaa loo Baakadeeyey, iyada oo ka duwan kuwa kale filim xumbo badan oo lakab ah. Waan ku faraxsanahay alaab-qeybiyaha. Maareeye Chandler ayaa la xiriiray, ka jawaabayay su'aalaha isla maalintaas. Waxaan rajeynayaa inaan sii wado wadashaqeynta.
Dukaankan CNC ayaa dhagxinaya! Aad ayaan ugu faraxsanahay adeegga iminkana waxaan haystaa saaxiib iga caawiya amarradayda waxay ka dhigaysaa wax walba mid aad u fudud. Waxaan ku soo rogayaa amarro badan hadda, adeeg dhakhso leh oo saaxiibtinimo leh. Weydiiso Rio inuu isagu weyn yahay inuu la shaqeeyo!
Adeeg aad ufiican inta howsha socoto oo dhan. Xidhiidhka degdega ah ee emaylka iyo whatsapp oo ka wada hadlaya dhammaan shuruudahayaga iyo faahfaahinta iyo shaybaarada ayaa si sax ah loo keenay sawirradeenna oo ah tayo aad u sarreeya oo dhammaystiran. Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno Ouzhan mustaqbalka waxa aan aaminsanahay inuu noqon doono xiriir muddo dheer ah oo ku saabsan alaabooyin dhowr ah oo ku jira galkayaga.